Utyalo-mali olunexabiso eliphantsi kwiAudio luya kwandisa ukuzibandakanya kweVidiyo | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 8, 2014 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Esinye sezizathu zokuba siqale olu luhlu lwevidiyo kukubonisa ukuba kulula kangakanani ukurekhoda kunye nokupapasha iividiyo ukunceda isicwangciso sakho sokuthengisa. Vula nayiphi na iMac okanye iPC yanamhlanje kwaye kukho ikhamera eyakhelweyo kunye nemakrofoni ekulungele ukurekhoda ividiyo yakho yemizuzu eyi-1 elandelayo. Cima inkqubo yokurekhoda yangaphakathi kwaye uhambe! Inye ingxaki encinci, nangona.
Imakrofoni eziza ngaphakathi ziyoyikeka ngokupheleleyo. Ngaba uyazi ukuba abantu bayayeka ukubukela ividiyo emnandi enesandi esibi…. kwaye ubukele ividiyo enevidiyo ekumgangatho owoyikekayo kodwa yeaudiyo elungileyo? Umsindo sisitshixo kuthethathethwano lwevidiyo. Kwaye awunyanzelekanga ukuba wenze utyalomali olukhulu kwizixhobo zesandi. Ndifuna ukungqina ngokurekhoda le vidiyo ilandelayo.
Sathenga ifayile ye- Imakrofoni encinci ye-lavalier kwiAmazon… Ixabise i $ 60 kunye nokuthumela kunye nokuphatha. Uyakuva isuntswana lokuqhekeka kuyo kwaye iyinto encinci, kodwa xa kuthelekiswa nemakrofoni yangaphakathi kwisiboniso se- $ 1,000 XNUMX seThunderbolt, ubusuku nemini. Qiniseka ukuba uyayibukela yonke ividiyo ukuva umahluko.
Imakrofoni yokuqala enkulu yi I-Audio-Technica AT2005USB Cardioid Dynamic USB / XLR Imakrofoni kwaye ingaphantsi kwe- $ 100. Siyisebenzisela iipodcast, ukurekhodwa kwevidiyo kunye neefowuni zikaSkype. Iyaphatheka kwaye kulula ukuyiphatha endleleni.
Ukuba ufuna ngokwenene ukuphuma konke, ungathenga isibini ISennheiser EW122PG3-Inkqubo yeeKhamera eziNgenantambo zeLavalier Microphone kunye a Zoom PodTrak P4 Podcast Recorder. Okukuphela koncedo olukhoyo ukuba awukwazi ukungena kwimakrofoni ye-lavalier kwikhamera yakho, kuya kufuneka usebenzise isandi sokurekhoda uze udibanise iaudiyo kunye nevidiyo kamva nesoftware yakho yokuhlela ividiyo. Ukuphuma kwindawo elula, nangona kunjalo, ephikisana nolu ngcelele.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndisebenzisa amakhonkco endihambelana nawo kweli nqaku leAmazon.
tags: mic yomntuodiyoIxabiso eliphantsi lemavalier micImakrofoni yelavalierukurekhoda umsindoukhwele i-lavalierUkukhwela kwimakrofoni ye-lavalierndikhwele miczoom rekhoda yedijithali
Uyonyusa njani i-imeyile yakho yamathuba okufika kwi-inbox